musha nyika dzakabatana Mabhirioni Bill Gates Childhood Indaba Plus Untold Biography Facts
Yedu Bill Gates Biography inokuudza Chokwadi nezve rake rehucheche Nyaya, Hupenyu hwepakutanga, Vabereki, Mhuri, Mudzimai, Vana, Mararamiro, Net Kukosha uye Hupenyu Hwega.
Muchidimbu, iyi i Hupenyu Hupenyu hweBill Gates. Isu tinotanga kubva pamazuva ehucheche hweBillionaire, kusvika paakazozivikanwa. Kuti uve nehupenyu hwako hwekuda kudya, heuno hudiki hwake kune vakuru gallery - chidimbu chakakwana cheBill Gates's Bio.
Hupenyu uye Kukwira kwaBill Gates.
Ehe, iwe neni tinoziva nezve ake akakosha mupiro kune hunyanzvi hwekuvandudza. Nekudaro, vashoma chete ndivo vanofunga Bill Gates 'biography, inoyevedza kwazvo. Zvino, pasina imwezve ado, ngatitangei.
Bill Gates Nyaya dzeChidiki:
William Henry Gates III akazvarwa musi wa 28 Gumiguru 1955 muSeattle, Washington. Iye aive mwana wechipiri uye mukomana wekutanga akaberekerwa kuna amai vake, Mary Maxwell Gates (mudzidzisi), uye kuna baba vake, William H. Gates Sr (aimbova gweta repamusoro).
Mufananidzo usingawanzo wanda waBill Gates uye hanzvadzi yake mukuru.
Kukura muSeattle, Mudiki bhiri yaionekwa sePrecocious (akangwara zvezera rake), hunhu hwakaita kuti ade amai vake. Nekudaro, aigara achienda naye pamwe naye kuzvikoro kwaanozvipira semudzidzisi.
Bill Anopa Magariro Emhuri:
Bill Gates akaberekerwa mumusha une mabvakirwo emhuri ane rekodhi rekodhi yevakadzidza vakadzidza. Uchenjeri hwake hunoshamisa uye hunoshamisa angave aive nhaka kubva kumidzi yemhuri.
Semukomana mudiki, anoshandisa nguva yakawanda naamai vake.
Bill Anopa Hupenyu hwepakutanga: Iyo yekuverenga Prodigy:
Bill akapinza mukana iwoyo nekuverenga mabhuku akati wandei aionekwa seakavanzika kuvana. Izvo hazvina kumutorera nguva yakawanda kuti apinze izvo zvakasiyana zvirimo mune yakazara enisaikoropidhiya!.
Iri bhuku riri muruoko rwake rinomupa mufaro usingatauriki.
KwaBill, kuverenga kwanga kusiri nguva yakapfuura chiitiko asi kuedza kwakatevedzera pfungwa dzekunzwisisa. Maererano naamai vake, mudiki Bill aigona dzimwe nguva kuzvivharira oga kwemaawa akawanda kuti atsike nzira yevanofunga zvakadzama.
"Tinomurasa dzimwe nguva kwemaawa nenguva uye pandingabvunza kuti uri kuitei? aiti, Ndiri kufunga amai! ”.
Kune avo, vabereki vaBill vakashandisa kukwikwidza uye kugona senzira yekurerwa, muyedzo wakazadziswa paBill vadiki nehanzvadzi dzake mbiri. Pazera rakapfava, Bill akadzidza kuve nezvinzvimbo uye akazvisiyanisa neake mune zvese zveudiki bidio yake kusanganisira mutambo uye wemitambo. Zvakare, akange aine penchant yekutamba mitambo miviri yebhodhi maviri; monopoly uye Njodzi (inoratidzwa pazasi).
Kuda kwake mitambo iyi kunoshamisira.
Bill Gates Dzidzo uye Basa Rinovaka:
Chikoro chakabatsira chikamu chayo kukurudzira madiki kubhadharira kuda kuziva. Akapinda chikoro chepuraimari chaakawana kufarira maths nesainzi. Kunze kwezvo, akazviita tsika yekugara uchishanyira nzvimbo dzemhando yepamusoro pa Seattle world fair (pakati paApril 21, 1962, kusvika Gumiguru 21, 1962).
Bill paakanyanya kuburitswa nezvishamiso zvesainzi, ndipo paakanyanya kusurukirwa uye akatanga kuratidza kumukira kwevechiri kuyaruka. Uku kushanduka kwechimbichimbi kwehunhu hakuna kuenda zvakanaka nevabereki vake vaida kuve mukutonga kwehunhu hwake. Sekureva kwaWilliam H. Gates Sr;
“Bill kumwe makore angangoita gumi nerimwe kana gumi nemaviri ekuberekwa akazvimiririra pamoyo. Akanga akagadzirira kuita pfungwa yake pamusoro pezvaaida kuita kana kusaita, uye izvi zvaive zvakaoma kwatiri kunyanya kuna amai vake. "
Panguva ino muhupenyu hwake, Bill akacherechedzwa kuti akarasa nzira yekushandisa nguva uye akaonekwa seakarasika gwara. Vabereki vake vakavhenekerwa vakasarudza kumunyoresa kuLakeside Chikoro muNorth Seattle kwavakatenda kuti aizowana zvese kurangwa uye nhungamiro.
Bill Anopa Hupenyu hwepakutanga Hupenyu:
Yakanga iri paLakeside Chikoro muNorth Seattle apo Bill akabatanidza kufarira kwake sainzi uye ruzivo rwemasvomhu mukuvaka basa mukomputa yako wega uye chirongwa.
Akaita hushamwari nemudzidzi wepamusoro-soro anonzi Paul Allen uyo akagovana kupindwa muropa kwakaenzana nemakomputa. Kunyange Allen aingova nemakore maviri kunaBill, airatidzika kuva akakura uye akanyarara kwazvo uye achifungisisa. Ukama hwavo hwepakutanga hwakatanga nekunyora software macodeti akasanganiswa pamwe nekwakwikwidza pakati pavo.
Hukuru hwemuviri wavo hauite senge uchitaura mutsauko pazera ravo.
Bill Gates Mugwagwa weFame Nhau:
Hukama hwaBill naAllen vakagadziriswa mubhizinesi kutanga nekuvandudzwa kwepurogiramu yekomputa, Traf-O-Data pamwe chete nemumwe mugadziri, Paul Gilbert. Iyo chirongwa chakagadzirirwa kuverenga iyo mbishi data kubva munzira yemigwagwa makomendi uye kugadzira mishumo yevanjiniya vemumigwagwa vakatora iwo mairi zviuru makumi maviri zvemadhora.
Bill Gates chirongwa chekutanga chakagadziridzwa- Traf-o-Dhata.
Mushure mekuita mabasa akati wandei pamwe, Bill naAllen vakataura nezvekugadzira yavo kambani, budiriro vabereki vaBill vakaramba vachisimbisa kuti Bill anofanira kupedzisa dzidzo yake asati atanga kuita chero basa.
Bill Gates Kukwira Kumukurumbira Nyaya:
Vabereki vaBill vaidada uye vaifara paakapedza kudzidza kuLakeside Chikoro (inoratidzwa pazasi) uye akafambira mberi kuenda kuHarvard achida kudzidza Mutemo. Nekudaro, moyo wake wanga usiri muzvidzidzo zvake sezvo aisakwanisa kuwana chero chinhu chinonakidza kupfuura basa rake nemakomputa.
Mufananidzo usingawanzo wanda waBill Gates uchisara padivi pababa vake panguva yavo yekupedza kudzidza kubva kuLakeside.
Pamwe naAllen, akasainira basa rekugadzira rakapfava neMITS iro rinosanganisira kugadzira software yemakomputa (budiriro yakaratidza kuberekwa kweMicrosoft). Hazvina kutora nguva refu Bill asati abuda muHarvard (pre-senior year), akanyoresa Microsoft sechiratidzo muna 1976. Makore maviri gare gare, Microsoft yekupera kwegore yekutengesa inodarika $ 1 miriyoni ukuwo Bill aine mukurumbira wekusangove wakaomarara asi akatarisa . Vamwe vese, sezvavanotaura, inhoroondo.
Bill Gates Hukama Hupenyu; Musikana, Mukadzi, uye Vana:
Bill Gates 'Musikana; Chiitiko chekufambidzana:
Hongu, Bill aive akaomarara uye akatarisa, asi aikwanisa kudiwa nezvido zvemwoyo wake kunyanya paakasangana naMelinda French kuMicrosoft. Bill akatanga kuona Melinda aimboshanda semaneja wechigadzirwa weMicrosoft pane imwe yemapikniki ekambani. Akamukumbira kunze kwekudya kwemanheru kwakazobudirira.
Mudiki Bill pane date nemusikana wake, Melinda.
Achitaura kuna Fortune makore mazhinji gare gare (mushure mewanano yavo) pane izvo zvakamukwezva kunaBill, Melinda akataura kuti;
"Ndakanyatsokwezva kune pfungwa dzake dzakanaka, asi kupfuura izvozvo, kuda kwake, uye anofara zvikuru. Ndinomuda iye. ”
Vakadanana kwemakore manomwe vasati varoora uye vakachengeta hupenyu hwavo hwakavanzika kubva pameso ekuona kwevamwe vavo. Zvakare, vaiteterera nhengo dzemhuri kuremekedza zvakavanzika zvavo.
Bill Gates 'Kuroora:
Vaviri ava vakapedzisira varoora mu1994 panguva iyoyo Manele Bay Hotel muHawaii. Kuchengeta muchato uri wega, Bill haana kungobhuka dzimba dzese muhotera asi akazoona kuti maherikoputa ese pachitsuwa cheMaui akaunganidzirwa kudzivirira vashanyi vasingadiwe kubhururuka pamusoro.
Mukati-kunze kwemuchato wemabhiriyoni. Vanotaridzika zvakanaka.
Bill Gates Vana:
Vaviri ava vakagara vachifara mushure mezvo kumba kwavo kwoumbozha - zita remadunhurirwa rekuti "Xanadu 2.0" - muMedina, Washington, uye imba yavo yakakomborerwa nevana vatatu: Jennifer Katharine (akazvarwa 1996), Rory John (akaberekwa 1999), uye Phoebe Adele (akazvarwa 2002).
Bill Anopa Hupenyu hwemhuri Chokwadi:
Bill akaberekerwa nevabereki vanoshandiswa mukukwikwidzana uye kubudirira senzira yekurerwa kwaBill nevakoma vake vaviri. Gara shure apo isu tichikuudza zvinhu zveGates mhuri.
Nezve Bill Gates 'Baba:
Baba vaBill Gates, William H. Gates Sr igweta remuAmerican pamudyandigere akazove mutsigiri uye munyori. Kusiyana naBill, William H. Gates Sr akasangana neMukadzi wake, Mary Maxwell kuYunivhesiti yeWashington ndokumuroora mwedzi yakazotevera.
Bill Gates anoratidza baba vake, William H. Gates Sr.
William H. Gates Sr aive pesvedzero yakanaka kuYoung Bill uye aive nehunhu hwokuzvarwa nahwo hunogona kupupurirwa nemwanakomana wake:
"Anoshanda pamwe chete, akangwara kwazvo, uye ane hanya nekudzidza zvinhu uye kunyatsoziva zvaari kutaura nezvazvo. Akanaka kudzoka shure kuti aone mufananidzo wakafara. ”
Nezve amai vaBill Gates:
Bill Gates Amai, Mary Maxwell aive mukadzi webhizinesi wekuAmerica akashanda makore gumi nemana paYunivhesiti yeWashington bhodhi regents. Kusvikira parufu rwake munaJune 18, aive akawanda pesvedzero yakanaka kuna Bill Gates uye akamupa rutsigiro rwetsika munguva dzekuyedza.
Sangana naamai vaBill Gates, Mary Maxwell.
Akavewo nechokwadi chekuti mukomana waBill panguva iyoyo (Melinda Gates) aone kuti mwanakomana wake anoshandisa hupfumi hwake kubatsira vamwe nekunyora tsamba kuna Melinda zuva rimwe vasati varoora. Chaiverengwa;
"Kubva kune avo vakapihwa zvakawanda, zvakawanda zvinotarisirwa,"
Mary akafa mushure memwedzi mitanhatu mushure mekurwiswa kunorwadza nekenza yemazamu uye Bill achiri kukoshesa tsamba yake kusvika nhasi nekurarama maererano neshoko.
Nezve Bill Gates 'Vanun'una:
Hanzvadzi yaBill mukuru, Kristianne Blake nee Gates anoverengerwa veruzhinji accountant uyo anonyanya kuronga zvemari nekuronga mutero. Aive zvakare akakosha mudiwa muDeloitte Haskins & Sells uye akatanga iye akasimba Gare gare muna 1989.
Padivi pake, hanzvadzi yaBill, Elizabeth Gates Armintrout aka Libby inosanganiswa nemasangano mazhinji ebasa sezvikoro uye mapoka ekutsigira. Iye anozivikanwa philanthropist.
Bill Gates hanzvadzi, Kristianne naElizabeth Libby.
Bill Anopa Hupenyu Hwechokwadi Chokwadi:
Bill Gates ane mubatanidzwa wehunhu hunogona kunge husingave hwakamubatsira kubudirira kwake seyekugadzika tekinoroji uye bhizinesi. Zvinosanganisira;
Bill Gates ari kushinga:
Chinyorwa chinokurudzira cheBill Gates Audacity nhoroondo yekureva kwaakaita nhema nezvekuita muturikiri weS Basic kuMITS (kambani inogadzira makomputa). Nekuda kweizvozvo, kambani yaishuvira kuona iyo software (iyo yakanga isati yagadzirwa), iko kukura uko akaita Gates naPaul Allen kuvandudza software yacho nekukurumidza. Ivo vaviri vakakwanisa kuburitsa software inoshanda, mwedzi mumwe gare gare, Microsoft yakavambwa kwete pane chirongwa chisati chavambwa asi manyepo.
Icho chidimbu chehupenyu hwehupenyu hwedu anozivikanwa ane bhirionari. Nyatso tarisisa mukamuri rake.
Bill Gates anokanganisa makomisheni:
Bill Gates akambosungwa nekuda kwekutyaira asina rezinesi chairo rekutyaira muna 1975. Akave akaverengerwa mhosva dzakasiyana siyana dzemumigwagwa dzinosanganisira kuwandisa. Izvi zviitiko zvakaita kuti abve muhofisi yemutengesi akanakisa muWashington kuti abhadharwe pamutemo pese paanodzokorora mhosva imwe chete.
Iwe hauzvitende! Bill Gates akambosungwa achityaira asina rezinesi rekutyaira.
Chiitiko chakafanana chakaitika muma1980s apo Bill padivi paPaul Allen vakasvika kunhandare yendege kunonoka kwendege yavo yanga yatotora. Bill Gates akamhanyira kuPaneru yekutonga ndokutanga kudzvanya mabhatani, danho rinogona kupa kuti asungwe. Neraki, mumwe munhu akadana ndege kuti idzokere ivo vaviri.
Bill Anoziva nzira yekuisa pamberi:
Kunyange zvazvo Bill Gates aive kuHavard, aive nematambudziko kuramba akasvinura mune dzimwe dzidziso nokuti akanga achishanda kumativi ose maawa ekunyora magwaro (inoratidzwa pasi apa).
Kugara husiku kunyora makodhi kwakamupedza simba. Iye zvino haakwanise kana kuramba akamuka panguva yehurukuro panguva yemasikati.
Tsika dzekare, sezvavanotaura, zvinofa zvakaoma, Bill Gates akatakura rake risingaperi basa maitiro kuMicrosoft. Imwe nguva, munyori mutsva akauya nemusi weMuvhuro mangwanani kuzomuwana akaradzikwa pasi. Akafunga kuti anga asingazive, asi anga achangomuka vhiki rese uye achitora mukana wekukurumidza.
Uyezve, Bill Gates ndomumwe wevapfumi munyika vanoziva kutaura "kwete". Masuwo anopa zano vamwe kuti vagone kutaura kuti kwete anotsanangura kuti chiyero chinotendera munhu kuti atarise pazvinhu zvinoita mutsauko.
Bill Gates Maitiro ehupenyu:
Kubva muna Chivabvu 2020, muzvinabhizimusi wedu weBillionaire aive nemari inofungidzirwa kusvika pamakumi mashanu ezviuru zvemadhora. Hichichisiri nhau kuti Bill akambopihwa mari nemauto semurume akapfuma kwazvo pasi pano. Aive ashanda nesimba zvakanyanya achishandisa tsika dzakakodzera dzebhizimusi kuti awedzere hupfumi hwaanofarira nhasi.
Chimwe chezvinhu zvine mukurumbira zvemuzvinabhizimusi wedu ane mukurumbira imba yake yemhando yepamusoro inozivikanwa seXanadu 2.0. Imba yaBill Gates ine yakasarudzika dhizaini uye tekinoroji. Kuparadzira 66,000-mita-tsoka tsoka yacho chiyero chakayerwa chiyero chakakosha mari inofungidzirwa yemamiriyoni zana nemakumi mashanu emamiriyoni emadhora
Bill Gates Untold Chokwadi:
Kuputira nyaya yedu yeBill Gates, hezvino zvimwe zvisinganyatsozivikanwa-chokwadi chinogona kukubatsira kuti unzwisise zvizere nezvehupenyu hwake.
Chokwadi # 1: Anokwikwidza Zvakawanda
Nyaya yekutyaira kwaBill yekukwikwidza inogona kuratidzwa nemirairo yetechnocrat kumhuri yake ichikumbira kuti vasiye kushandisa zvigadzirwa zveApple. Rairo rakauya mwedzi mushure mekunge maBill magedhi abatsira Steve Job kumutsidzira Apple, rubatsiro rwakakonzera kambani mukubudirira kwemeteoric uye makwikwi neMicrosoft.
Kubatsira kwake Steve Job kwakamuunza kune imwe nguva yemakwikwi.
Nyaya yenyaya yaBill Gates maonero echitendero inokakavadzana. Kunyange zvazvo technocrat isingatauri zvakananga kutenda kana kusatenda muna Mwari, anoita kuti vanhu vanzwisise kuti anotsvaka mhinduro kune zvakavanzika kubva mune sayenzi. Izvo zvinokwana kutaura kuti kutakura kwake pane nyaya yacho kwakapfupiswa munguva yehurukuro nePBS naDavid Frost;
“Panyaya yekuita zvinhu ndinotora nzira yesainzi yekuti sei zvinhu zvichiitika uye kuti zvinoitika sei. Handizive kuti kuna mwari here kana kuti kwete, asi ndinofunga misimboti yechitendero inoshanda "
Zvakakosha kucherechedza kuti Bill Gates dzimwe nguva anoenda kuMisa pamwe chete nemudzimai wake nevana avo vanozvipira maKaturike.
Chokwadi # 3: Basa Remhete:
Microsoft sekuziva kwedu haisi kungogadzirwa kwaBill Gates neshamwari yake Allen asi Bill magedhi basa. Tinokuunzira mashoma mashoma akakosha enguva yekushanduka kwekambani.
APR 4, 1975: Microsoft yakagadzwa naBill Gates naPaul Allen.
February 1976: Gates 'akatumira "Vhura Tsamba kune maHobbyists" umo maakaita chishuwo chakakura chekuti vanoda zvemakomputa varemekedze kodzero dzevanogadzira software dzakaburitswa mugwaro repamba reHomebrew Computer Club.
26 November 1976: Gates naAllen vanyoresa zita rekutengeserana "Microsoft". Basa ravo rave rakazvimiririra neMITS. Gates akasiya zvidzidzo zvake zveHarvard zvachose, uye iye naAllen vari kutora vashandi.
18 March 1988: Apple inokwidza nyaya inopesana neMicrosoft, ichiti "kutarisa uye kunzwa" kweWindows kwakafanana neApple "graphical user interface" Hondo yepamutemo yakatora makore matanhatu uye Apple yakazorasikirwa.
1989: Microsoft Office inosunungurwa.
1992: Vamwe vevakwikwidzi veMicrosoft vakasangana kugovana zvinonetsa pamusoro pekuwedzera kwekutonga kwekambani yeGates.
May 1998: Dhipatimendi reRubatsiro neAttorneys General ye20 inoshusha Microsoft kuti inopesana nemakwikwi.
7 June 2000: Kutevera kubvunzurudzwa kweDhipatimendi rezvemitemo, Mutongi Jackson anotonga kuti Microsoft inofanirwa kupatsanurwa kuita zvikamu zviviri: imwe kugadzira masisitimu anoshanda, imwe kugadzira zvimwe zvikamu zve software. Anodana Microsoft kuti "kushungurudza munhu".
27 June 2008: Gates akasiya basa rake renguva yakazara paMicrosoft kuti afunge nezvebasa reBill uye Melinda Gates Foundation.
Oct 22, 2009: Microsoft Yakaburitswa Windows 7 iyo yaifanirwa kuve yakanyanya kutarisa, kukwidziridzwa kumusoro kweWindows mutsara, kunyatsoenderana nemashandisirwo uye zvigadzirwa zveWindows Vista zvatoenderana.
October 26, 2012: Microsoft yakabudiswa Windows 8 yakagadziridzwa neMicrosoft sechikamu chemhuri yehutano hweWindows NT. Kuvandudzwa kweWindows 8 yakatanga kusunungurwa kwekambotanga, Windows 7, mu 2009.
Chikunguru 29, 2015: Microsoft yakabudisa Windows 10 iyo ndiyo yekutanga yeWindows inogadziridza zvirongwa zvinowanikwa.
Bill Gates 'wiki knowledgebase inobatsira iwe kuwana ruzivo nezvake muchidimbu uye zvine mutsindo. Tsvaga pazasi;
Zita rizere William Henry Gates III
Zita reNick Bill Gates
Akazvarwa 28th October 1955
Baba William H. Gates Sr
Amai Mary Maxwell
Vanun'una Kristianne Blake nee Gates naElizabeth Gates Armintrout aka Libby
murume Melinda Gates
Children Jennifer Katharine, Rory John, uye Phoebe Adele
Inokosha kukosha $ 106.3 bhiriyoni
urefu 1.77 m (5feet 10inches)
uremu 70 kg (154 lbs)
Ruvara Rune Meso Gireyi
basa Software kuvandudza, investor muzvinabhizimusi, uye philanthropist.
Kutenda nekuverenga Biography yeBill Gates, iyo co-muvambi weMicrosoft. Zvikawanda saka, ndinokutendai nekutenda mune Zvatiri uye Zvatinoita.
Ndichiri kuisa ichi chinyorwa paBill Gates Biography uye Yehucheche Nyaya, vagadziri vedu vaive vakatarisa kururamisa uye kururamisa. Nomutsa isa zvaunotaura kana kutibata nesu kana iwe ukaona chimwe chinhu chisingatarise zvakanaka pachinyorwa chino nezvake.